Maxay tahay SABABTA dawada mar loo qaato cuntada kahor marna kaddib?!! | Hadalsame Media
DAAWO: Fanaaniin & jilayaal Carbeed oo sheegay inay taageerayaan dadka MADOW…
Home Caafimaadka Maxay tahay SABABTA dawada mar loo qaato cuntada kahor marna kaddib?!!
Maxay tahay SABABTA dawada mar loo qaato cuntada kahor marna kaddib?!!
(Hadalsame) 06 Agoosto 2019 – Halkan uga boqo sababaha oo idil.
1 – Cuntada ka hor daawada cun ” wuxuu dhakhtarku ula jeedaa 30 daqiiqo ka hor waa in aad cuntaa daawadaan”ma ahan 2 daqiiqo ama hal daqiiqo ka hor, sababta saas uu u leeyahayna waxa ay tahay daawooyinkaas ayaa shaqadii ay jirka u qaban lahaayeen ay dhumeysaa hadii cuntada ay caloosha iskugu tagaan.
2 – Cuntada kadib cun daawadaan “wuxuu dhakhtarku ula jeeda ilaa 5 daqiiqo cuntada kadib cun daawada” ma ahan 30 daqiiqo ka dib cuntada.
Sababta cuntada kadib in aad cunto daawada uu kuu amrayo dhakhtarku waxa ay tahay daawooyinka qaar ayaa hadii ay caloosha tagaan iyada oo maran ayey dhaawici karaan gidaarada hoose ee caloosha.
3 – Dhamayso daawadaaan ” micnaheedo waa dhamayso dhamaan daawada laguu qorey xitaa hadii aad caafimaado wax yar marka aad ka qaadato daawada”
Sababta aad u dhamaysanayso daawada waxa ay tahay si loo dilo dhamaan jeermiskii ku harey jirkaada,
balse hadii aad dhamaysan waydo daawada waxaa dhacaysaa in uu xoogeysto jeermiskii xanuunka keeney uuna la qabsi la sameeyo daawadii sidaasna uu xanuunkii uu kugu soo celiyo daawadiina hadii aad mar kale aad qaadato ay waxba kaa tari waydo maadaama uu la qabsadey jeermiskii.
4 – Daawooyinka Fitimiinka ah qaado cuntada kadib ” macnaheedo waa in aad cuntaa daawooyinka fitimiinka ah ee uu dhakhtarku kuu qorey cuntada kadib”
Sababtu waxa weeye caloosha oo maran hadii aad fitimiin daawo ah qaadato horey ayey ka baxaysa oo kaadidaada ayey soo raacin marka wa in aad cuntada kadib cuntaa.
Waxaa Diyaariyay: Cabdulqaadir Mustaf Cabdullaahi
Previous articleSUUQA EPL: Laacibiinta ay doonayaan kooxaha waawayn ee Horyaalka Ingiriiska (Dhegeyso)
Next articleWaxaa ku duntey buur ka culus daarta Empire State iyagoo ciidda ka hooseeya 2300 oo cagood (Qaybtii 1-aad)
(Hadalsame) 04 Juun 2020 - Bismillah, 𝗤𝗶𝗶𝗺𝗮𝗵𝗮 𝗶𝘆𝗼 𝗤𝗮𝗮𝘆𝗮𝗵𝗮 𝗗𝗶𝗯𝘂 𝗛𝗲𝘀𝗵𝗶𝗶𝘀𝗶𝗶𝗻𝘁𝗮. Maanta waxaan akhriyey maqaalkan (hoose) ee laga qoray taallooyin ku yaalla gobolka Virginia ee...
DAAWO: Fanaaniin & jilayaal Carbeed oo sheegay inay taageerayaan dadka MADOW oo laftooda cunsuriyad lagu eedeeyey!